အို ဘယ့် . . . မြစ်ဆုံ | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
အို ဘယ့် . . . မြစ်ဆုံ
ခုတလောမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စတွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတွေ၊ နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှုတွေနဲ့အပြိုင် ပြည်သူများ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်နေတဲ့ သတင်းကတော့ မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အစဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စပြဲဖစ်ပါတယ် ။ အစိုးရအနေဖြင့် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားသည့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတရာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးပါက အကြောင်းပြချက်ကို ပြည်သူများအား ရှင်းပြမယ်ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်မြို့နယ်မှာ ဒေသခံများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ကျွန်တော်အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးက စိတ်ဝင်စားယုံမက နှလုံးသားကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်သလို ခံစားကြရပါတယ်။ နှလုံးသားကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ ချစ်ခင်ကြင်နာလို့ အသိပေးရင်တော့ နူးနူးညံ့ညံ့လေး ကိုင်ဆုပ်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ တကယ်မလိုလားတဲ့ ကြမ်းရှရှဆုပ်ကိုင်မှုကိုတော့ ဘယ်သူမှမလိုလားကြတာကတော့ အထူးပြောစရာ လိုမယ်မထင်ပါ။
ဒေါ်စုကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါတယ်။ မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်လည်း ပြည်သူကိုတင်ပြမယ်။ ဘာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ် ဆိုတာကိုလည်း တင်ပြမယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာတော့ အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီမံကိန်း ပေါက်စနလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူလူထုက သိရမှာပဲမဟုတ်ပါလား။ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို စာချုပ်ချုပ်ပြီး စတင်ခဲ့တာနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာကတော့ ယခင် စစ်အစိုးရ(တပ်မတော်အစိုးရ) ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်သူကို အသိမပေးဘဲ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေကို တစ်ဖက်တရုတ်ပြည်ကို ပုံပေးထားတာကြောင့်ရော၊ ကောင်းကျိုးဆိုုးကျိုးသေချာ မတွက်ချက်ခဲ့တာတွေကြောင့် နိုင်ငံရေး အတော်အတန် ပွင့်လင်းလာတဲ့အခါမှာ မြန်မာပြည်သူလူထုက ကန့်ကွက်လို့ သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ ခေတ္တရပ်နားထားပြီး ယခု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရကျမှ ဆက်လုပ်သင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်ရမယ့် စီမံကိန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကြီးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းပေါ်ကျရောက်လာတဲ့ စစ်အစိုးရ(တပ်မတော်အစိုးရ) ရဲ့ ရှုတ်ထုတ်ကြီးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကိစ္စကို ကျွန်တော်လေ့လာရသလောက်ကတော့ ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်ပြီး၊ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ ခက်ခဲ နက်နဲတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရေကာတာကြီးတွေ တည်ဆောက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရယူကာ တိုးတက်လာတဲ့၊ တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ တိုးတက်တယ်ဆိုတာလည်း စစ်တမ်းတွေအရရော၊ စာတမ်းတွေအရရော၊ တွေ့ရှိချက်တွေအရရော၊ သုတေသန စာတမ်းတွေအရရော မျက်မှောက်အခြေအနေနဲ့ရော လက်တွေ့ကျကျ ပြောလို့ရတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝမြေငလျင်ဒဏ်၊ ရာသီဥတုဒဏ်တွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကိစ္စတွေကိုပါ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ပြီး တည်ဆောက်အောင်မြင်နေကြတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေ အများကြီးပင် ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ ရှာဖတ်ကြည့်ရင် အကောင်းအဆိုးတွေကို တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ လူသားတွေဟာ အဆိုးထက် အကောင်းတွေကို ခုံမင်ကြတာကတော့ အထူးပြောစရာ လိုမယ်မထင်ပါ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေးကြည့်ကြရအောင်လား။
အစိုးရက မည်သည့်စီမံကိန်းအကြီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ဖြစ်စေ ပြည်သူကိုရှင်းပြရမယ်၊ ပြည်သူကို ချပြတဲ့နေရာမှာလည်း ကိုယ်ကမှန်တယ်ထင်လို့ လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်း ရှင်းရလိမ့်မယ်။ မှန်တယ်ထင်လို့ရှိရင် အမုန်းခံပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုရင်လည်း လုပ်ရဲရမယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ် ဆိုတာ အချစ်ခံချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ အကျိုးဖြစ်စေချင်လို့လုပ်တာ. .လို့ ဒေါ်စုက ပြောတော့ ဒေါ်စုရဲ့ မြန်မာ့အရေး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လုပ်လာခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဉာဏ်ပညာကို ဆန်းစစ်ရင် မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ကိုသာ တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ၊ လုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်၊ အကျိုးယုတ်မဲ့အလုပ်မျိုးကို ဒေါ်စုက ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။ အစိုးရအနေဖြင့် စီမံကိန်းများကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ စီးပွားရေးသာမက နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်း ဒေါ်စုတစ်ယောက်တည်း စဉ်းစားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းပညာရှင် တွေရော၊ ပြည်ပပညာရှင်တွေရော အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစားကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုစဉ်းစားတဲ့ အခါမှာ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား( National Interest ) ကိုတော့ ရှေ့တန်းတင်မှာကတော့ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား( National Interest )ကို ရှေ့တန်းတင်ကြတာပဲ၊ အခြေခံခဲ့တာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ဒီနေရာမှာ တစ်ကိုယ်တော်နဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ အကျိုးကိုတော့ ဒေါ်စု ကြည့်မှာမဟုတ်တာကတော့ သေချာလှပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီရပါမယ်။ တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒိအပြင်ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်အောင်လည်း လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ဒေါ်စုက အချို့စီမံကိန်းကြီးများမှာ နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် ဆက်စပ်နေသည့်အတွက် ကမ္ဘာ့ ယုံကြည်မှုရစေရန် အခုတစ်မျိုး၊ တော်ကြာတစ်မျိုးလုပ်၍ မကြောင်းလည်း ပြည်သူတွေကို ပြောထားပါတယ်။
ပြန်ချုံ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း အဆိုးနည်းပါးပြီး ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်းမယ်ဆိုခဲ့ရင်၊ မူရင်းစာချုပ်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ စာချုပ်ပါအချက်အလက်တွေနှင့် တစ်နည်းတစ်ဖုံ ပြုပြင်ထားသောစီမံကိန်းအစုစုဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို ထင်ဟပ် နေမယ်ဆိုခဲ့ရင်၊ နောင် ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်တွေ ကောင်းစားမယ်ဆိုခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြပြီး ၊ အကယ်၍ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ သယံဇာတများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လွန်စွာထိခိုက်ပျက်စီးစေလျင်သော်လည်းကောင်း၊ အနာဂတ် အကျိုးစီးပွားများ ဆုတ်ယုတ်စေလျင်သော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်နာကျင်စေလျင်သော်လည်းကောင်း သေချာသည်ဆိုပါက ကျွန်တော်တို့ဟာဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ကန့်ကွက်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဒေါ်စုပြောသလိုပင် . . " ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လည်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရာမှာ အမြင်ကျယ်စေချင် ကြောင်း ၊ စီးပွားရေးဘက်က စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တောင် ရေရှည် စဉ်းစားရပါတယ်။ တစ်ခဏအတွက်မစဉ်းစားရပါဘူး” ဟုသာ ဆိုလိုချင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ။